IiTattoos ezincinci zommandla wesihlahla | Ukuzoba
Iitattoos ezincinci zommandla wesihlahla
Susana Garcia | | Iitatoo, IiTattoos engalweni
Los IiTattoos ezincinci zifunwa kakhulu kule mihla, kuba bayasivumela ukuba senze umvambo omncinci onophawu olukhulu ngaphandle kokuqaqamba. Abantu abaninzi baqala ngetattoo encinci kwindawo yesihlahla, ebavumela ukuba baqale kwihlabathi lamathambo.
Makhe sibone ezinye uyilo oludume kakhulu kwiitattoos ezincinci indawo yesihlahla. Oku kunokuba yinto efanelekileyo yokuqala. Ukongeza, indawo yesihlahla isetyenziswa ngokubanzi kuba ayilimazi kakhulu kwaye sibona itattoo kakhulu.
1 Iimpawu zeempawu ezingapheliyo
2 Umvambo we-unalome
3 Iimpawu zehange
4 Iitattoos ezinesilhouettes zezilwanyana
5 Iintliziyo zesandla sakho
Iimpawu zeempawu ezingapheliyo
El uphawu olungapheliyo luye lwaba yinto ethandwa kakhulu Kwiminyaka eyadlulayo. Inokuthetha izinto ezininzi kodwa ngaphezulu kwayo yonke into ithetha kuthi ngezinto ezihlala zihlala. Kungenxa yoko le nto ihlala ikhatshwa ngoonobumba abangabaququzeleli bomntu obalulekileyo okanye nokuba ngumkhondo weenyawo omele isilwanyana sasekhaya.
El Unalome yenye yezo iisimboli ezithandwa ngabantu abaninzi ngento abayimeleyo. Kule meko luphawu oluthetha ngendlela ukucamngca kunye nobomi kunye neengxaki zayo kunye nokujika kwayo kunokusikhokelela kulonwabo kunye nobulumko. Olu phawu lunokubonakaliswa lodwa okanye ngeentyatyambo ze-lotus ekugqibeleni.
Las iiankile zikwasetyenziswa kakhulu. Ayenzelwe abo bantu bathanda ulwandle kuphela. Iankile inokumela ukuba sifuna ukuhlala kwindawo ethile ebalulekileyo kuthi. Ukuba kukho umntu omele ngokuchanekileyo i-ankile esigcina silungile, ngaphandle kokukhukuliseka.
Iitattoos ezinesilhouettes zezilwanyana
Ezi tattoos zincinci zintsusa. Ezi zimbini ziluhlaza izilwanyana ezimbini, indlovu kunye negusha. Ukuba uthanda isilwanyana ngokukodwa, unokufumana ne tattoo kwinqanaba elincinci.
Iintliziyo zesandla sakho
Los iintliziyo zimele uthando. Kungenxa yoko le nto luphawu olusetyenziswa ngabantu abaninzi. Abanye bade bayidibanise kunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Iitattoos ezincinci zommandla wesihlahla
Iitattoo emapoliseni asekuhlaleni: eSanta Cruz de Tenerife banokuba sele benxibile
Iitoti zeRudder: ukunika isikhokelo ebomini bakho